देउवा सरकारले ड.केसीलाई पक्राउ गरेर लज्जास्पद काम गर्यो : रवीन्द्र मिश्र – Vision Khabar
देउवा सरकारले ड.केसीलाई पक्राउ गरेर लज्जास्पद काम गर्यो : रवीन्द्र मिश्र
। २५ पुष २०७४, मंगलवार ११:४४ मा प्रकाशित
पुस २५, काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीको गिरफ्तारी गरेर सरकारले लाजमर्दो काम गरेको विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक रविन्द्र मिश्रले बताएका छन । मिश्रले डा. केसीलाई तत्काल रिहा गरि उनले लगाएका आरोपमाथि छानविन गर्न समेत माग गरेका छन् ।
पक्राउ परेका डा. केसीको समर्थनमा माइतीघर मण्डलामा भएको प्रदर्शनमा सहभागीहरुलाई सम्बोधन गर्दै मिश्रले यस्तो माग समेत गरेका हुन । डा. केसीलाई अपराधी जसरी रातारात गिरफ्तार गरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका छन ।
न्यायालय, कर्मचारीतन्त्रका साथै स्वतन्त्र रहनुपर्ने निकायहरु राजनीतिकरण गरिएको र त्यही राजनीतिकरणको परीणाम यो घटना पनि भएको मिश्रले बताए ।
उनले डा. केसीलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरे । डा. केसीले उठाएको आवाज सर्वोच्च र सिंहदरबारले पनि सुन्नुपर्ने भन्दै मिश्रले भने, ‘उनलाई रिहा गरेर उनले जुन गम्भीर आरोप लगाएका छन्, त्यसबारे छानविन हुर्नैपर्छ ।’ डा. केसीले अभिव्यक्ति केही आक्रोश भए पनि त्यस्लाई मानहानीको लिन नहुने उनको जिकिर छ ।
स्वास्थ्य सेवामा सुधार ल्याउन लडेको मान्छेलाई अपराधी जसरी गिरफ्तार गर्ने सरकारलाई अधिकार नै छैन मिश्रले भने ।